Sida loo Beddelaan AVI si iPhone 4s on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > iPhone > Sida loo Beddelaan AVI si iPhone 5S / 5 / 4s ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan AVI si iPhone 5S / 5 / 4s ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
"Waxaan leeyahay qaar ka mid ah divx-movies (.avi) on my computer waxaan doonayaa inaan iyaga loogu badalo, sidaa darteed waxaan u daawatid on my iPhone 4. Waxaan isku dayay gacan-jabis laakiin ma shaqayn. Iyo sidoo kale, Anigu ma raadin kartaa wax faa'iido leh la Google. Waa maxay barnaamijka waxaan isticmaalo? "
Si aad u ciyaaro AVI (filimada Divx) on iPhone 5S / 4s / 5 , iPhone 4 iyo tusaalayaal kale oo ah iPhone, waxaad u baahan tahay marka hore si loogu badalo AVI ama Divx si iPhone qaabab socon sida MP4, MOV ama M4V. Maqaalkani waxa uu barayaa laba xal loogu celiyaa qaab AVI in qaab iPhone ee Mac iyo Windows (Windows 10 ka mid ah) ee ku caawinaya in la sameeyo loo maqli ah. Halkan waxaan ku tag tallaabada ay Hanuuniyaa tallaabo:
Qaybta 1aad: Sida loo badalo AVI video inay iPhone ee Mac
Qeybta 2: Sida loo Beddelaan AVI video inay iPhone in Windows
Qaybta 1aad: Sida loo badalo AVI / Divx video inay iPhone 5S / 5 / 4s ee Mac
Si aad u samayn file oo caynkaas ah AVI in file iPhone Mac diinta, waxaad u baahan tahay xirfadle video Converter u Mac si ay kuu caawiyaan. Mid ka mid halkan lagu adeegsaday ee aad siisa aalladda-degdeg ah xawaaraha diinta iyo sidoo kale video tayada khasaaraha-yar:
Si toos ah jiidi & hoos u files AVI si aad u app ee Mac, ama madaxa si "File" menu markaas dooran "Load Media Faylal ay" si ay u dajiyaan faylasha aad diinta. Diinta Dufcaddii la oggol yahay;
Dooro qaab wax soo saarka aad. Wixii iPhone, Converter this ayaa bixisey horena ah filaayo in qalabka si aad si toos ah u dooran kartaa: furo liiska qaabka> Tag "Device"> Dooro iPhone. Horena waa loo heli karaa iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS iyo iPhone 4;
Guji "Beddelaan" si loogu badalo AVI si iPhone ee Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Libaaxa iwm ..
Qeybta 2: Sida loo badalo files AVI / Divx si iPhone in Windows (Windows 10 ka mid ah)
Waxaad u baahan tahay oo ah in AVI iPhone Video Converter , kaas oo kaa caawin kara si loogu badalo qaab AVI si iPhone 5S / 5 / 4s qaabab taageeray. Converter Tani waxay noqon kartaa doorasho adiga kuu wanaagsan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa mid aad u fudud in saddex tallaabo.
Tallaabada 1. Ku dar files AVI in AVI in ay Converter iPhone (Windows 8 taageeray)
Laba siyood oo aad ku dari file AVI:
1. Riix ah "Add Files" button ku darto AVI video files si video AVI in ay Converter iPhone.
2. Si toos ah jiidi files AVI aad galay video AVI in ay Converter iPhone.
Converter Tani waxay taageertaa diinta Dufcaddii, si aad u dajiyaan karaa oo loogu badalo dhawr files multimedia hal mar.
Tallaabada qaab saarka 2. Dooro
Habka ugu fudud ee loo dhigay qaab wax soo saarka waa inay riix "Qaabka" button image dhinaca midig, Oo waxaad heli doontaa mid ka mid ah sida aad doonayso inaad ee "Apple" category. Waxaad riix kartaa "Open Folder" liiska hoos-hoos in la qeexo tusaha on your computer si loo badbaadiyo files wax soo saarka.
Tallaabada 3. Start diinta
Guji "Beddelaan" si ay u bilaabaan AVI / Divx si iPhone video diinta. The diinta bar horumar aad u muujinaysa inta Deji la soo gabagabeeyo.
Waa intaas. Waxaad ku raaxaysan karaan iyo wadaagaan AVI videos aad on your iPhone 5S / 5 / 4s hadda. Waa maxay dheeraad ah, haddii aad rabto in aad videos in ay aad u cajiib ah, waxaad samaysan karta xal video, qaniini heerka, codec iyo heerka jir si aad u hesho wax soo saarka kaamil ah videos, iyo sidoo kale edit ku AVI video files by falinjeeerka, lana siii oo ku daray saamaynta gaar ah iyo watermarks , waxaad ka hor inta aanay wax soo saarka. Tani video AVI si iPhone Video Converter (Windows 8 taageeray) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u samayn!